I-china pp ibhokisi lukathayela lukhiqizi kanye nomphakeli | Sihai
Imvamisa, i-pp ibhokisi lukathayela elisebenzisayo lisebenzisa u-2-5mm obukhulu iphepha lukathayela elenziwe, i-GSM ngokuya ngezicelo ezahlukahlukene zokukhiqiza ezihlukile zeshidi elingenalutho, ngokusho kokwehluka okuhlukile, lingenziwa ibhokisi lenzuzo, ibhokisi lokupakisha, isitsha senzuzo, isitsha sokupakisha, Ibhokisi le-ESD, ibhokisi lokubuyiswa kwe-ESD nabanye ibhokisi lokupakisha le-ESD, ibhokisi lokugcina impahla nebhokisi lokugcina impahla, ibhokisi lepulasitiki le-antistatic, ibhokisi lembuyiselo yezithelo, ibhokisi lembuyiselo ye-anti-static, ibhokisi lepulasitiki elihamba phambili, ibhokisi lepulasitiki elibuyisa ilangabi, ukwahlukaniswa kwebhokisi lenzuzo, ibhokisi lokuphuma kwensimbi, isiphuzo ibhokisi lokuthengiselana, ibhokisi lokuphuma kwezibulala-zinambuzane, amabhokisi okupakisha okudla nemifino, ibhokisi lokuphuma kwepulasitiki, izinsimbi zokunemba zokupakisha kwangaphakathi, amabhokisi okupakisha imithi, amabhokisi eposi, ukufakwa kwepuleti lepuleti, ungqimba lwepuleti, ukupakisha ungqimba, ibhokisi lephedi lepulasitiki, njll. .
Izici zebhokisi lebhokisi likathengisi elakhiwe
Ibhokisi lenzuzo elithambile le-pp alinabo ubuthi, alinambitheki, linobufakazi bomswakama, ukumelana nokugqwala, isisindo esilula, lihlala isikhathi eside, liqinile, libukeka lihle, umbala ocebile, umsulwa, uvuseleleke kabusha, ukuvikelwa kwemvelo, akukho ukungcola nezinye izici.
Inezici zokugoqa ukumelana, ukumelana nokuguga, amandla amakhulu wokuthwala, ukudweba, ukuminyana, ukudwengula, izinga lokushisa okuphezulu nombala ocebile. Senziwa ibhokisi lohlobo olujikelezayo, elingasetshenziselwa inzuzo kanye nokuqedwa kokuthunyelwa komkhiqizo okuphelile. Isisindo esincane, siqinile futhi siyakwazi ukugoqeka. Ibhokisi lenzuzo elitholakalayo ngokuya ngezidingo zomsebenzisi lingenziwa ngezifiso elenziwe ngemininingwane ehlukahlukene, osayizi, i-aluminium alloy cover onqenqemeni, ingavinjelwa, ingabi nothuli, ibukeke kahle futhi iphane.
kk ibhokisi lokungenisa okungenalutho lenzelwe futhi lenziwa ngokuya ngosayizi ohlinzekwe ngamakhasimende, ukuze kuzuzwe ukulayishwa okunengqondo kakhulu, futhi amabhokisi amaningi angagqagqana, asebenzise ngempumelelo indawo yokusebenzela, akhuphule indawo yokugcina izingxenye, futhi alondoloze izindleko zokukhiqiza.
Izicelo zebhokisi lokungeniswa kwebhokisi elingenalutho:
Kk ibhokisi lokungena elingenalutho lisetshenziswa kakhulu ezimbonini eziningi, lingaqeda ugesi ongaguquguquki, inani elikhulu lezinto ze-elektroniki nemikhiqizo kunqubo yokukhiqiza ukulayishwa kwemali engenayo, ukupakisha, ukugcina nokuhambisa.
Uma kuqhathaniswa nemikhiqizo yomjovo, i-pp ibhokisi elingenalutho linezinzuzo ze-shockproof, idizayini eguquguqukayo, isakhiwo esiguquguqukayo futhi asikho isidingo sokuvula isikhunta somjovo. Ngasikhathi sinye, okokusebenza kungalawulwa ngokuguquguqukayo ngokungeza i-anti-static, izinto ezi-conductive base, njll. Ipuleti elingenalutho le-ESD lingakhiqiza ngemisebenzi ehambisanayo ne-anti-static. Ukwehla kobuso be-anti-static pp board kungalawulwa phakathi kwe-103 futhi 109.
Kk ipuleti elingenalutho lisetshenziswa kakhulu ku-elekthronikhi, ukupakisha, imishini, imboni elula, insizakalo yeposi, ukudla, imithi, isibulala-zinambuzane, izinto zasendlini, ukukhangisa, ukuhlobisa, izinto zokubhala, ubuchwepheshe be-magnetic magnetic, umuthi wobunjiniyela bezinto eziphilayo kanye nezempilo nezinye izimboni. Ingabe uhlobo olusha lwezinto zokupakisha zemvelo.
Langaphambilini kk ishidi eziyize, kp ishidi lukathayela
Olandelayo: pp ishidi likathayela nge-eva, epe foam